ကားထဲမှာဒီလိုပစ္စည်းထားရင် သင့်ကို ၁၅စက္ကန့်အတွင်းသေစေနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား ???
အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး အော်သံတွေကိုကြားရတာနဲ့ ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်ဖို့ ကောင်းလိုက်သလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လုို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပါသလဲ။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ လူငယ်လေးတစ်ယောက်မီးခြစ်ခြစ်လိုက်တာနဲ့...
ဟိုက်ဝေး ကားမောင်းချိန်တွေမှာ လက်မောင်း နာကျင်ခြင်း မရှိအောင် သင် ဒါတွေ လုပ်ပါ..!
တချို့က ကားမောင်းပြီး ခရီးသွားရတာ သက်သာတယ်၊ ဇိမ်ကျတယ် ထင်ကြတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကား မောင်းရတာလည်း ထင်သလောက်တော့ မကောင်း၊ ဇိမ်မကျပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းလို Used ကား စီးနင်းမှုများတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့။ တဖက်နိုင်ငံမှာ အနည်းနဲ့အများ သုံး ပြီးသား၊...
ကားမီးလောင်ခြင်းနဲ့ သိကောင်းစရာများ ..!
ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းမှာလည်း နွေရာသီရောက်ပြီဆိုရင် ရာသီဥတု အပူချိန် မြင့်တက်လာမှုနဲ့ အတူ မော်တော်ကား ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အားနည်းမှု၊ မောင်းနှင်မှုပုံစံ အားနည်းမှုတွေကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေ အတွင်းကနေ စတင်ပြီး ကားမီးလောင်ခြင်း ဖြစ်ရပ်တွေ...
ကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်း တစေ့တစောင်း
ကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းဆိုတာ ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီး၊ ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ကားအသစ်တွေ၊ တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေကို လက်လီပြန်ရောင်းပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့...
အခုတခါ ကျနော်က လက်ရှိ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ မော်တော်ကားတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အင်ဂျင်တွေ ထဲက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအင်ဂျင်တွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဆီစားနှုန်း၊ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှုနဲ့ အရည်အသွေး တွေကို ကြည့်ပြီး ပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) Ford Shelby Mustang GT350...